တိကျစွာထိုးသွင်းမှို core ကို pin ကို
အစိတ်အပိုင်းများကိုထိုးသွင်း | ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်း | ဆေးထိုးပုံသွင်း အစိတ်အပိုင်းများ | ပလပ်စတစ်ဆေးထိုး အစိတ်အပိုင်းများ | ဆေးထိုးခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ စိတ်ကြိုက်ဆေးထိုးခြင်း | ဆေးထိုးပုံသွင်း အစိတ်အပိုင်းများ | ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်း | ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးပုံသွင်းစက် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ တိကျစွာ ထိုးသွင်းမှို ပင်မပင်တွယ်ပစ္စည်း: SKD 61 သည်းခံစိတ်: +/-0.003မီလီမီတာ…
ထိုးမှို core ကို pin ကို
ဆေးထိုးမှို core pin ပစ္စည်းများ: SKD 61 သည်းခံစိတ်: +/-0.003mm လိုအပ်ချက်အရ လျှောက်လွှာ: Plastic molding နှင့် Die casting Processing အချိန်: 15 နေ့ရက်များ ပို့ဆောင်ခြင်း။: 3~ ၁၀ ရက် DHL / UPS / FedEx အမြန်နှုန်းဖြင့်, လေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းစသည်တို့. အကယ်၍ သင့်တွင် Injection mold core pin နှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာအချို့ရှိသည်။ , သို့မဟုတ် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက…
ပလပ်စတစ်မှို core ကိုနှင့်လိုင်
ပလပ်စတစ်မှို အူတိုင်နှင့် အခေါင်းပေါက် Start သည် မှိုအစိတ်အပိုင်းများကို ပေးသွင်းသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောမှိုအမာခံများနှင့်လိုင်ခေါင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်. ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်အကွက်တွင် တိကျသောမှိုအူတိုင်နှင့် အခေါင်းပေါက်ထုတ်လုပ်သူ → တစ်ပိုင်းပြီးစ လုပ်ငန်းစဉ် : ကြိတ်ခွဲ - CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - CNC - လမ်းလျှောက်ပိုး - EDM - ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း:…
ပလပ်စတစ်ဦးထုပ်မှိုလိုင်ကို Start သည် tooling အစိတ်အပိုင်းများပေးသွင်းသည်။. အခေါင်းပေါက်သည် များသောအားဖြင့် မှိုအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင် ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးဖြစ်သည်။. ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကိရိယာတန်ဆာပလာများတွင် အသုံးပြုသည့် တိကျသောဦးထုပ်မှိုပေါက် : CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - CNC - လမ်းလျှောက်ပိုး - ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း: S136 စာနာထောက်ထားမှု: +/-0.003mm အဖြစ်…
မှိုဒီဇိုင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်မှိုအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ပလပ်စတစ်မှိုပေါက်ခြင်း Start သည် မှိုပုံစံဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ဖြေရှင်းချက်ပေးသည်။, အတွင်းခန်းအလှဆင်ရာတွင် ပလပ်စတစ်ပုံစံများကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။, အတွင်းခန်းအလှဆင်ရာတွင် ပလပ်စတစ်ပုံစံများကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။, အတွင်းခန်းအလှဆင်ရာတွင် ပလပ်စတစ်ပုံစံများကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။, မှိုလိုင် | ပလပ်စတစ်မှိုလိုင် | အခေါင်းပေါက် ဆေးထိုးခြင်း | အခေါင်းပေါက်ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် | Multi cavity မှိုဒီဇိုင်း | မှို…
ပလပ်စတစ် ပိတ်ဆို့ခြင်း ကလိုင်ပေါက် Start သည် တိကျသော မှိုအစိတ်အပိုင်း အမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။, အူတိုင်, ကလိုင်, slider, lifter, လမ်းညွှန်မှတ်တိုင်, ထုတ်ယူတံ, ချုံ, လက်စွပ် စသည်တို့, ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏ကိရိယာတန်ဆာပလာအတွက်အသုံးပြုသောတိကျမှို slider. လုပ်ငန်းစဉ် : ကြိတ်ခြင်း။ - CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - CNC - လမ်းလျှောက်ပိုး - EDM…
အီလက်ထရောနစ်မှို core ကို
အီလက်ထရွန်းနစ်မှို core Start သည် စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်မှိုအစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။, mold core အပါအဝင်, ကလိုင်, ထည့်သွင်းပါ။, slider, lifter, pin စသည်တို့, ဆေးပညာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။, မော်တော်ကား, ထုပ်ပိုးမှု, အရုပ်, အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ် စသည်တို့ဖြစ်သည်။, ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏ကိရိယာတန်ဆာပလာအတွက်အသုံးပြုသောတိကျမှို slider. လုပ်ငန်းစဉ် : ကြိတ်ခြင်း...
ပလပ်စတစ်မှိုအူတိုင် မှိုအူတိုင်၏ ယေဘူယျဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။, အထူးသဖြင့် ပြိုကျနိုင်သော core ဖြစ်သည်။. မှိုအမာခံပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် မှို၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။. ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင်အသုံးပြုသော တိကျသောပုံစံခွက်အူတိုင်. လုပ်ငန်းစဉ် : ကြိတ်ခြင်း။ - CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်နေသည်...
Plastic toy core and cavity Start can manufactureavariety of custom plastic mold parts, mold core အပါအဝင်, ကလိုင်, ထည့်သွင်းပါ။, slider, lifter, pin စသည်တို့, ဆေးပညာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။, မော်တော်ကား, ထုပ်ပိုးမှု, အရုပ်, electronic and communication fields etc. ပစ္စည်း: Precision mold core and cavity used in toy forming. လုပ်ငန်းစဉ် : Milling-…